Olee otú ime Draịvụ Data Recovery maka Win na Mac OS X "
> Resource> Naghachi> Olee otú iji nweta Draịvụ Data Recovery maka Win na Mac OS X
Mgbaàmà nke ike mbanye data ọnwụ
1. Efu egweri biini ma ọ bụ ahịhịa.
2. Ezighị Ọkpụkpọ ike mbanye na-enweghị ndabere.
3. Ida data mgbe usoro weghachi.
4. Mere a na-ezighị ezi na ime ihe na ẹdude partitions mgbe wụnye a ọhụrụ ọrụ usoro (dị ka Mac OS X na Windows, ma ọ bụ Windows na Mac OS X.
5. The ike mbanye na-ezi uche emerụ ma ọ bụ jiri, enweghị ike ịnweta data ma ọ bụ faịlụ.
6. nkebi table na-corruptted ọ bụ mebiri emebi.
7. Ike mbanye na-aghọ keerughi ruru virus inflection.
Olee otú naghachi furu efu data si ike mbanye?
E nwere ndị ka ndị ọzọ ihe mere na-eme ka ike mbanye data ọnwụ. Ka a okwu nke eziokwu, ị maa nwere ohere ime diski ike mgbake dị ka ogologo oge nri nzọụkwụ na-iwere na ọ dịghị ahụ mmebi nke ike mbanye. Ike mbanye data mgbake bụ iji naghachi data si draịvụ ike gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows onye ọrụ, Wondershare Data Recovery bụ dị ike otú ahụ na a pụrụ ịdabere disk mgbake software n'ihi na ị na-agbake faịlụ site na draịvụ ike na gị onwe gị. Ọ na-akwado nke furu efu data mgbake niile ọnọdụ n'elu. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, na-echigharịkwuru Wondershare Data Recovery for Mac.
Atụmatụ: Adịghị wụnye Data Recovery omume na otu nkebi ebe ị furu efu data maka ezere overwriting mbụ data.
Ebe a na-ewe Data Recovery maka Windows dị ka ihe atụ.
Nzọụkwụ na Iru Draịvụ Data Recovery maka Windows
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori ke software ma họrọ otu mgbake ụdịdị dị ka gị data ọnwụ ihe kpatara ya.
• ehichapụ / Lost File Iweghachite - Ịchọpụta data site na diski ike mgbe ị na iwu Mgbanwe + Del ma ọ bụ efu nke egweri biini. Na weghachite Ị na-efu data ọbụna zuru ezu nchekwa Ọdịdị si formatted ma ọ bụ ihe ezi uche emerụ nkebi.
• nkebi Iweghachite - Naghachi furu efu nkebi ma data ruru nkebi ọnwụ, nkebi Ihichapụ, na nkebi njehie.
• Raw Iweghachite - Deep Doppler na-agbake data ọbụna mgbe faịlụ usoro na-emerụ.
• malitegharịa Iweghachite - Zọpụta na mbubata gara aga Doppler results maka na-aga n'ihu data mgbake enweghị rescanning.
Nzọụkwụ 2: Họrọ HDD ị chọrọ iji naghachi data site na.
Step3: ịhụchalụ faịlụ na chọpụta faịlụ gị mkpa.
Nzọụkwụ 4: Họrọ a ebe ịzọpụta recoverable data.
Video nkuzi nke ike mbanye data mgbake
Atụmatụ maka Mma Chance nke Draịvụ Data Recovery
1. Tupu diski ike data mgbake, ozugbo kwụsị iji ike mbanye na-etinye ya ebe dị nchebe bụrụ na ihe ọ bụla anụ ahụ mebiri nwere ike ime.
2. Mgbe ị na-ewere ike mbanye data mgbake software naghachi faịlụ, mma ịzọpụta Natara faịlụ ọzọ disk bụrụ na data overwriting.
AmazonBasics Iweghachite: Olee naghachi Lost faịlụ site AmazonBasics
Olee otú Naghachi ehichapụ Email Files